Lapel Pin, Billadaha Ciyaaraha, Birta Keychain - Kingtai
Shirkadda Kingtai ee soosaarka farsamada xaddidan, Shirkadda soo saarta farsamada birta ee caanka ah, oo haysata in ka badan 20 sano khibrado kala duwan oo farsamo gacmeedyo ah, gabi ahaanba isdhexgalka warshadaha iyo shirkadda ganacsiga, sidaas awgeed waxaan leenahay koox naqshadeysan iyo koox ganacsi.
Waxaan bixinnaa alaab dhaqameed pop ah, oo ay ku jiraan furaha furaha, billadaha, calaamadda pin, magnets, qaaddo cabbiraadda iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaan noqon karnaa mid dabacsan oo baahidaada ganacsi ah oo aan u soo saarno alaabada sida ku xusan sawiradaada naqshadeysan, shaybaarada la qaabeeyay, iyo shuruudaha faahfaahsan
Astaamaha Muhiimka ah Qadaadiicdayada xusuusta ahi waa qurux aan caadi ahayn oo qurux badan, taas oo noqon karta ter ...
Adeegsiga ugu Fiican Biladani waxay kufiican tahay xarfaha qaabka loo jaro ama loo naqshadeeyo ...
Noocyada Muhiimka ah Biinankayada dhabta ah ee loo yaqaan 'Die-cast cut' musqulaha waxay leeyihiin tayo 3D ah, oo laga heli karo labada baal ...
In ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan farshaxanka birta iyo farsamooyinka wax soo saarka, waxaan haysannaa adeeg hal-joogsi ah, laga bilaabo naqshadeynta illaa alaabada la dhammeeyay, si aad u nasan karto.
Tan iyo markii la aasaasay ， Ruqsadaha iyo shatiyadaha aan helnay waxay ka badan yihiin 30 qaybood, dhowr ka mid ahna ay yihiin Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA iyo ISO9001.
Shirkadda Kingtai ee xaddidan wax soo saarka, oo haysa in ka badan 20 sano khibrado kala duwan oo wax soo saar farsamo ah, gabi ahaanba isdhexgalka warshadaha iyo shirkadda ganacsiga, sidaas awgeed waxaan leenahay koox naqshadeyn baaluq iyo koox ganacsi.
KingTai-ga maanta wuxuu ku shaqeynayaa ujeedka adeegga macaamiisha-koowaad, wuxuuna ka qeybgalay Carwada Canton iyo Bandhigga Hong Kong sannado badan. Waxaan u fidinaa adeeg daacad ah macaamiisha ， oo waxaan ku sii cusbooneysiineynaa iimaanka abuurista nolosha ee wanaagsan